I-BMW Z4 entsha ihlukile kunalena yaphambilini | Isolezwe
I-BMW Z4 entsha ihlukile kunalena yaphambilini
Ezezimoto / 5 April 2019, 2:20pm / FANELESIBONGE BENGU
UMA ubuka iBMW Z4 entsha, abubuzwa ubusha bayo ngoba yehluke kakhulu kuneyelamayo.
Uma ngingakuthi fahla nje, endala, edayiswe kusukela ngo-2012 kuze kuba wunyaka odlule, kuthengwe angu-115 000 emhlabeni jikelele.
Uma kungathiwa imoto ithengwa ngobuhle kuphela unganaki nokuthi ifika nani nokuthi ibiza kanjani, iZ4 ingathengwa ubuthaphuthaphu.
Ngaphambili ine-grille eyehlukile kunezinye izimoto zakwabo, inamaLED headlights futhi uma uthanda ukwazi ukufaka ama-adaptive LED headlights.
Lo mncanyana ukhasa phansi futhi ushaya ngemibala emihlanu egqamile. Okhakhayini babuyise oluthambile oluyindwangu oluvaleka noma luvuleke ngokushesha njengoba kuyithatha imizuzwana engu-10. Konke lokhu uyakwazi ukukwenza ngebanga elingaphansi kuka-50 km/* .
KwaBMW bayethule ngezinhlobo ezimbili okuyi sDrive20i kanjalo neM40i.
I-sDrive20i ifika namarimu angu-18 inch kuthi M40i yona ibe namarimu angu-19 inch.
Yize ngiyibize ngomncanyana ngenhla kodwa ngokwezinombolo ithe ukuba nkudlwana kunendala. Ubude bayo bungu-4 324 mm (bunyuke ngo-85 mm), ububanzi bungu-1 864 mm (bande ngo-74 mm) bese kuthi ukuya phezulu kwaba ngu-1 304 mm (bukhushulwe ngo-13 mm).
Iwheelbase bayenze yaba mfishane ngo-26 mm yaba ngu-2 470 mm.
Uma ungena ngaphakathi kunezihlalo ezimbili zesikhumba ezingamasports seats. Njengoba ngishilo ukuthi ikhasa phansi, noma ungena ushona phansi kodwa uyakwazi ukuzinyusa izihlalo uhlale ngendlela ofisa ngayo.
Phakathi nendawo kukhona isikhala sokubeka iziphuzo esivela ngokuvula lapho uphumuza khona ingalo futhi kukhona namanye amakhosomba okubeka izinto ngemuva kwezihlalo.
Okungihlabe umxhwele wukuthi ibhuthi inesikhala esikahle ngisho ngabe ukhakhayi luvuliwe ngenxa yokuthi yilolu oluthambile olungathathi isikhathi esikhulu. Isikhala sayo singu-281 litres.
Njengezinye izimoto zakamuva zakwaBMW, ifika nobuchwepheshe obuningi obuhlanganisa ukuthi ibike uma izoshayisa, ibike uma uphume emzileni futhi uma uthanda ungayifaka i-Active Cruise Control eyenza ukuthi izihambele iphinde izimele uma kukhona enye imoto, Head-Up Display, ikhamera eveza ingemuva uma upaka futhi iyazipaka noma izikhiphe lapho ipake khona nokunye.
Ngasemandleni i-sDrive20i inenjini engu-2.0 litre four-cylinder enamandla angu-145 kW netorque engu-320 Nm. Ukusuka ku-0 iye ku-100 km/* kuyithatha imizuzwana engu-6.6.
Eyesibili iM40i inenjini engu-3.0 litre straight-six eneM Performance TwinPower Turbo technology. Ifuqa amandla angu-250 kW netorque engu-500 Nm. La mandla enza ukuthi ikwazi ukusuka ku-0 iye ku-100 km/* ngemizuzwana engu-4.6.
Zombili zisebenzisa i eight-speed Steptronic Sport transmission.
I-M40i ifika ne-Adaptive M Sport suspension, M Sport brakes neM Sport differential esebenza ngogesi.
Ngithole ithuba lokushayela i-sDrive20i emigwaqeni eyahlukene eKapa.
Njengoba ngishilo, okokuqala okungihlabe umxhwele wukuvuleka kwebhuthi. Ikahle uma ufuna ukuzishayelwa wumoya ngoba ihamba kamnandi ngamandla enele futhi akukho lapho ebisokola khona.
Emabhambini iyazwela kodwa hhayi ngendlela ebabazisayo futhi injalo nje, iyawadonsa amehlo ngobuhle bayo.
BMW Z4 sDrive20i Sport LineR775 900
BMW Z4 sDrive20i M Sport R779 100
Intengo lihlangisa intela yeVAT hhayi eyeCO2.